सरकारी मोटरसाइकल चड्ने भाइरल युवायुवती मिडियामा, सनसनीपूर्ण खुलासा (भिडियो) – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/सरकारी मोटरसाइकल चड्ने भाइरल युवायुवती मिडियामा, सनसनीपूर्ण खुलासा (भिडियो)
770 Less thanaminute
काठमाडौँ, ७ साउन । सरकारी मोटरसाइकलमा पश्चिमी शैलीको पोशाक लगाएकी युवतीसंग एक युवक हुइकि रहेको तस्विर केहिदिनदेखी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । सुरुमा त धेरैले यो फोटोसप हो भनेर पनि आफ्नो विचार पोखे । तर त्यो तस्विर वास्तविक थियो ।
त्यहि तस्विरका मुख्य पात्र मिडियामा आएका छन् । सरकारी नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा अस्वाभाविक पोसाक लगाएकी युवती चढाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा केही दिनदेखि उक्त फोटो भाइरल बनेको थियो । फोटोका बारेमा सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया आएपछि उक्त मोटरसाइकलका चालक सरकारी कर्मचारी र उनीसँगै रहेकी युवती मिडियामा आएका छन् ।
उनीहरू दुवै गल्छी गाउँपालिकामा कार्यरत प्राविधिक भएको खुलेको छ । सरकारी नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा युवती राखेर कुनै होटेल रिर्सोटमा समेत पुगेको गलत हल्ला समेत चल्न थालेपछि उनीहरू मिडियामा आएर आफ्नो कुरा राखेका हुन । ति युवकले आफुले खासै गल्ति नगरेको, यदि गल्ति भएको भए कानुन बमोजिम सजाय भोग्न पनि तयार रहेको बताएका छन ।
यति होचो मेघराजले बिहे गरे, अग्ली श्रीमती ! यस्तो छोरा जन्मिए । खान नपाएर ६ महिने बालकको बिचल्ली [VIDEO]
उर्लिए नेपाली, हामी नेपाल आमाको छातीमा गाडी चलाउँने भारतलाई छोड्दैनौ [भिडियोसहित]
बिहे गरेको भोली पल्ट देखी कु’टन सुरु ! सु’हागरातको दिन रक्सीले फिटान,३ महिनापछि यस्तो हालत-भिडियो हेर्नुहोस
बिजय शाहीको जस्तै फर्मुला भएको ब्यक्ति भेटियो, क्यालेन्डर २ मिनेटमा खरर । (हेर्नुहोस भिडियो)
एक महिलाको ३ श्रीमान, माहिलो मिडियामा आएपछी खुल्यो यस्तो रहस्य…!